Michael Owen oo sheegay hal sabab uu Paul Pogba kaga tagi karo Manchester United – Gool FM
(Manchester) 20 Nof 2020. Weeraryahankii hore kooxaha Liverpool iyo Manchester United ee Michael Owen ayaa sheegay in ciyaaryahanka reer France ee Paul Pogba uu si dhab ah uga fiirsan doono ka tagista United-ka, hadii uu kusii jiro kursiga keydka.
Xiddiga heerka caalami ee reer France Paul Pogba ayaa keydka fadhiyay labadii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay kooxda Manchester United.
Paul Pogba ayaa qeyb qaatay 39 daqiiqo labadii kulan ee la soo dhaafay ee Istanbul Basaksehir ee tartanka UEFA Champions League, iyo Everton oo horyaalka Premier League ah.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Metro” ee dalka England haleeyga Michael Owen ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Manchester United wali may helin laxankeeda, waana inay raadisaa qaabkii ay ugu soo saari laheyd ciyaartoydeeda garoonka dhexdiisa kuwa ugu fiican.”
“Paul Pogba, ma sameyn kartid inuu kusii jiro kursiga keydka, haddii uusan ku jirin safka koowaad ee kooxda, waxaa laga yaabaa inuu ka fiirsado doorashooyinka kale isla markaana uu ka tago Man United.”
Waxaa xusid mudan in qandaraaska xiddiga reer France ee Paul Pogba ee kooxdiisa Manchester United uu ku egyahay xagaaga 2022.